Ọrịa ara ure Cell Growth akwụsị site Osteoporosis Drug - News Ọchịchị
A ikpe ke ụmụ oke egosiwo na ọgwụ denosumab nwere ike ibu a preventative ọrịa ara ure ọgwụgwọ n'ihi na ndị inyom na BRCA1 site n'usoro mmụba
Isiokwu a na-akpọ “Ọrịa ara ure cell ibu akwụsị mgbasa site osteoporosis ọgwụ, ọmụmụ na-egosi” e dere site Ian ịlele Science nchịkọta akụkọ, n'ihi na The Guardian on Monday 20 June 2016 15.40 UTC
Women ndị nwere a elu n'ihe ize ndụ nke ọrịa ara ure na-erite site a ọgwụ na-ama kenyere na-emeso ọkpụkpụ ọnwụ na agadi, dị ka ndị ọkà mmụta sayensị na Australia.
Na-eme nnyocha achọpụtala na osteoporosis ọgwụ, denosumab, nwere ike kwụsị uto nke mkpụrụ ndụ nke na-enye ịrị elu na ara etuto ahụ na ndị inyom onye ize ndụ nke ọrịa dị ukwuu n'ihi mmụba na a site n'usoro akpọ BRCA1.
Ọ bụ ezie na ekwe, ọrụ bụ na nzọụkwụ mbụ na-arụpụta ịmụta otú anya si ụlọ nyocha ule na ụmụ oke na ara anụ ahụ ga-aruputaghari na nnukwu mmadụ ọnwụnwa tupu ọgwụ ike ga-atụle ka a preventative ọgwụgwọ.
Healthy BRCA1 na BRCA2 mkpụrụ ndụ ihe nketa enyere ahụ ya dịghachi DNA. Ma mgbe ma site n'usoro na-mutated, ihe ize ndụ nke ara na ovarian cancer nwere ike ebili steeply. Ihe dị ka ọkara nke ndị inyom na-eketa a na-emerụ mutation na BRCA1 ma ọ bụ BRCA2 ga ịzụlite ọrịa ara ure site na afọ 70.
Women na-achọpụta mgbe ha na-ebu na-emerụ BRCA mmụba nwere ike na-ahọrọ preventative ahụ ma wepụ ha ara, ma ọ bụ nwere ihe kpụ ọkụ n'ọnụ screening n'ihi etuto ahụ. "Anyị nwere mmasị na-achọta eri oké nri nhọrọ, a na-abụghị ndị e ji awa ahụ obibia maka ndị inyom a,"Kwuru Emma Nolan na Walter na Eliza Ụlọ Nzukọ Institute of Medical Research na Victoria.
Related: Ọmụmụ ihe n'ebe ahaziri ọgwụgwọ maka ọrịa ara ure
The ọkà mmụta sayensị nyochaa ara anụ ahụ nyere si a nwaanyị chọpụtara na BRCA1 mmụba. site na nke a, ha dịpụrụ adịpụ a pụrụ iche otu nke mkpụrụ ndụ nke na-eto ngwa ngwa ma yiri precursors nke ara etuto ahụ.
Ka o nyochakwuru mkpụrụ ndụ gosiri na ha buuru a protein welara n'elu, akpọ RANK1. Otu protein a na-ezubere iche site denosumab, nke a na-ama-eji na-emeso osteoporosis na ọrịa ara ure nke igbasa ọkpụkpụ.
Na lab ule kọrọ na magazin Nature Medicine, denosumab egbochi uto nke cancer precursor mkpụrụ ndụ na slowed uto nke etuto ahụ na ụmụ oke bred ịzụlite ọrịa ara ure.
"Anyị nwere nnọọ obi ụtọ site nchọpụta ndị a n'ihi na ọ pụtara na anyị na hụrụ a dị aghụghọ na pụrụ ịbụ bara uru iji gbochie ọrịa ara ure ke nnọọ elu n'ihe ize ndụ inyom, Karịsịa BRCA1 mutation na-ebu,"Kwuru Geoff Lindeman, a ọgwụ oncologist ke Royal Melbourne Hospital. Ọ si a na-adakarị ule iji nyochaa ọgwụ na ọrịa esesịn malitere.
Emma Smith na Cancer Research UK kwuru: "Insights n'ime ụmụ irighiri eme akpụ ibu na ndị inyom na-ezighị BRCA1 mkpụrụ ndụ ihe nketa pụrụ iduga ọhụrụ e si agwọ ọrịa mbenata ihe ize ndụ nke na-emepe emepe ọrịa ara ure, -enye ndị inyom a ọzọ nhọrọ Lower ha n'ihe ize ndụ. Ma nke a na-amụ na-rụrụ ụmụ oke na on mkpụrụ ndụ ke ụlọ nyocha, otú anyị na-amaghị otú irè nke a obibia nwere ike ịbụ na mbenata ara cancer ize ndụ na ndị inyom, ma ọ bụ otú ọ na-eji tụnyere nhọrọ maka mgbochi na-ama dịnụ. "
52261	11 Nkeji edemede, Biology, ọrịa ara ure, mkpụrụ ndụ ihe nketa, Health, Ian Sample, Main ngalaba, Medical research, News, ovarian cancer, Science, Society, The Guardian, UK Home News, UK ozi ọma, UK Science
← OnePlus 3 Review Bose QC35 Wireless Ekweisi Review →